Maalinta: Ogast 14, 2018
Shirkadda Baska Yüntaş A.Ş waxay sii wadaysaa tababbarka darawalada si xawli ku socda .. Wadashaqeynta YÜNTAŞ A.Ş, Xarunta Tababbarka Gawaarida Badbaadada (GÜSEM) iyo ANADOLU ISUZU, waa mid wax ku ool ah oo nabad galyo u leh darawalada gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Malaayiin Dollar Maalgelinta Dhibaatada Gaadiidka ee Denizli
Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo saxiixday maalgashi malaayiin rodol ah si loo xalliyo dhibaatada gaadiidka, ayaa ah mid ka mid ah baahiyaha ugu weyn ee Denizli waxayna dhameystirtaa mashaariicdeeda midba mid. Gaadiidka Degmada Denizli ee Magaalo Weyn [More ...]
Eskişehir-İnönü Khadka Xawaare Sare Km 276 + 992 iyo Km 278 + 738'den Lugta Xareed Tirada 4 Tirada Shaqooyinka Hadiyadaha Iyadoo ay sabab u tahay jilitaanka guud ee Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka (TCCDD) 2018 / 358616 GCC xaddid qiimo [More ...]
Sida adduunka intiisa kale, saamaynta isbedelka cimilada adduunka ayaa si isa soo taraysa ugu dareemay waddankeenna. Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee 2018 Warbixinta Khatarta Dunida ayaa baaray, isbeddelada cimilada, masiibooyinka dabiiciga ah, [More ...]
15 hindisada ee Aydın-Denizli Motorway, oo lagu dhawaaqay in la qaban doono bisha Agoosto, ayaa dib loogu dhigay 18 Sebtember 2018. Qandaraasyada wadada weyn ee u dhexeeya Aydın iyo Denizli ayaa dib loo dhigay markii saddexaad. Qandaraaska loogu talagalay wadada weyn ee "Aydın-Denizli" ee lagu qaban doono qaabka loo yaqaan 'Dhismaha-Operation-Transfer' ayaa la qaban doonaa bisha Luulyo. [More ...]
Shabakadda Railways Network waxay ka kordheysaa Uzbekistan si Shiinaha
Uzbekistan ayaa bilawday nadiifinta wadooyinka tareenka ee laga soo qaadayo Kyrgyzstan ilaa Shiinaha Uzbekistan ayaa ku dhawaaqday inay bilaawday koronto siinta wadooyinka tareenka ee laga soo bilaabo Kyrgyzstan ilaa Shiinaha. Pap-Namangan-Andijan, oo mideeya bariga Uzbekistan oo ay la jirto Kyrgyzstan iyo Shiinaha [More ...]
Gaadiidka Iskuulka Maalinta Koowaad ee Dugsiyada ee Bilaashka ah ee Ardayda iyo Waalidiinta
Sida ku xusan go’aanka Golaha Dowlada Hoose ee Magaaladda Adis-ababa, dhamaan basaska iyo tareenka dhulka hoostiisa maraba waxay u noqon doonaan bilaash ardayda iyo waalidiinta maalinta ugu horeysa ee Sanadka Tacliinta 2018-2019. Kalfadhiga koowaad ee Dowlada Hoose ee Magaalada Adana [More ...]
50 Kharashka Maalinta Gaadiidka Dadweynaha ee Istanbul
Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, sida ciidaha hore, gawaarida gaadiidka dadweynaha oo lagu dari doono iyo 50 gaadiid ka dhimista gawaaridaan ayaa go’aansaday inay sameeyaan. Marka loo eego muwaadiniinta, dhibbanaha [More ...]
BTS Çorlu Tababar Shil Baabuur: "15 Geeriga Shaqaalaha Sanadka B
Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee Qaramada Midoobay (BTS) ayaa diyaariyey warbixin ku saabsan shilka tareenka ee ka dhacay Çorlu, halkaas oo lagu dilay 25. Warbixinta, daadadkii dhowaanta iyo shilalka kaabayaasha ee xumaaday ee qadka tareenka, Xawaaraha Sare [More ...]
RayHaber 14.08.2018 Warbixinta Shirka
Amasya Ferhat Hill Cable Baabuurta Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Is-gadaalinta Isticmaalka Warbaahinta Isgaadhsiinta Rakaabka Rakaabka Rakaabka Boorama Diiwaanka Gawaarida waxaa la samayn doonaa shaqooyin kala duwan oo lagu fulin doono xarumaha taraamka
Sivas Ankara YHT Duulimaadyada waa in lagu bilaabaa 2019
Wadada Sivas Ankara 405 km ayaa billowday YHT tareenka waxaana loo qorsheeyay in uu istaago xarunta 2019 inta lagu gudajiro safarka saacadaha 2. Ankara ka dib, Elmadağ Kırıkkale [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir, oo saxeexday daraasado cilmiyeed oo ku saabsan badbaadinta geedaha waaweyn ee hantida guud ee magaalada, ayaa sidoo kale qaaday geedo diyaaradeed qarniyaal duug ah oo ku yaal Gazi Boulevard xaaladdan. Daaweynta geedaha duugga ah ee magaalada oo dhan [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, D-100'de Adnan Menderes iyo isgoyska Turgut Ozal dhanka jihada Ankara ee wadada dheeriga ah ee loo abuuray gaadiidka dadweynaha ayaa dhameystirtay shaqada. 14 Agoosto Talaado [More ...]